Philips HP 8600 Curler | Buy online | SHOP.COM.MM
ကောက်တဲ့သူက ဖြောင့်ချင်သလို ညီမတို့လိုဖြောင်တဲ့လူကကျ ကောက်ချင်ပြန်ရော။ ဆိုင်သွားကောက်ရမှာစိတ်ကမရှည်ပြန်ဘူးရယ်။ အဲ့တာနဲ့ Philips ဆံပင်ကောက်စက်လေးဝယ်ပြီး အိမ်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ လုပ်လိုက်တော့တယ်။ ဆံပင်လည်းမပျက်စီးတော့ဘူး။ Read more Hide
Philips ဆံပင်ကောက်လေးက ဆံပင်ကောက်ပုံစံအမျိုးမျိုးလည်း ပြုလုပ်နိုင်တာကြောင့် အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ Read more Hide
ဆံပင်ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးကောက်နိုင်ပြီး အသုံးပြုရတာလွယ်ကူပါတယ်။ Read more Hide
This purple hair curler hasamaximum temperature setting of 180°C that enable to shape your hair. Give those strandsafascinatingly flamboyant and bouncy curl with jazzy waves that make you look gorgeous.
If you want to create beautiful curls or waves, you needacurling iron withamedium sized diameter. 32 mm is the perfect size for creating fashionable curls and waves. Truly the professional's choice
Specifications of HP 8600 Curler